Tag: xayeysiinta dhijitaalka ah | Martech Zone
Tag: xayaysiis dijitaal ah
Jimco, Oktoobar 16, 2020 Jimco, Oktoobar 16, 2020 Douglas Karr
Swaarm waa barxad ku-meel-gaadh ah oo wax-ku-ool ah oo siisa hay'adaha, xayeysiiyayaasha, iyo shabakadaha awood u leh inay si buuxda ula socdaan oo ay u xakameeyaan dadaalkooda suuq-geynta waqtiga-dhabta ah iyagoo hubinaya koboc faa'iido leh. Barxada ayaa laga soo saaray dhulka hoostiisa si ay u fududaato in la isticmaalo, hadana awood badan, iyadoo la adeegsanayo otomaatiga ololaha ee xogta ku saleysan si ay uga caawiso suuqleyda inay si guul leh u cabbiraan una wanaajiyaan ololayaasha qiimaha dhaqaale. Halkii aan ka sameyn lahayn hoos-u-dejin, waxaan ka dhignay sheygan gundhig. Xaq uga soo
Talaado, September 26, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Lacag ka sameynta daabacaadda ma sahlana sida muuqata. Si aad ah ugu fiirso daabacaad kasta oo weyn waxaadna ka heli doontaa nus dersin xanaaqyo kala duwan ah oo ficil ahaan ka baryaya akhristayaasha inay baxaan. Hadana way sameeyaan. Si kastaba ha noqotee, lacag-sameynta waa shar shardi ah. Jeclaaw ama ha jeclaan, waa inaan bixiyaa biilasha ku xeeran halkan sidaa darteed waxaan u baahanahay inaan si taxaddar leh isugu dheellitiro kafaalo qaadka iyo xayeysiinta. Mid ka mid ah aaggii aan dooneynay inaan ku hagaajino lacag-sameynta wuxuu ahaa kuweena